Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii rakaabka ee afar dal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii rakaabka ee afar dal
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Breaking News Finland • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Ruushka • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Vietnam • Wararka Hindiya • Wararka kala duwan
Ruushka ayaa dib u bilaabay adeegii hawada ee Qatar, India, Vietnam iyo Finland
Saraakiisha Ruushka ayaa ku dhawaaqay in bisha Janaayo 27, 2021, Ruushka uu dib u bilaabi doono duulimaadyadii uu la tagi lahaa afar dal, kuwaas oo horay loo joojiyay sababo la xiriira Covid-19 faafa.
Laga bilaabo Arbacada soo socota, muwaadiniinta Ruushka waxay awoodi doonaan inay u duulaan Qatar, India, Vietnam iyo Finland. Muwaadiniinta dalalkan, ayaa sidaas, waxay awoodi doonaan inay u duulaan Ruushka. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa kuwa sharci deganaansho ka haysta dalalkan.
Go'aankan dib loogu bilaabayo xiriirkii hawada ee afartaas dal waxaa sameeyay xarunta rasmiga ee howlgalka Ruushka ee coronavirus, waxaana amarka u dhignaa saxiixay Ra'iisul Wasaaraha Ruushka.
Sida lagu sheegay war rasmi ah, duulimaadyada aada Qatar waxay aadi doonaan seddex jeer usbuucii, India, Vietnam iyo Finland - laba jeer usbuucii.
Waxaa sidoo kale la shaaciyay in Qubrus ay u furi doonto xuduudaha dalxiisayaasha ajaanibta ah bisha Maarso 1deeda.
Xayiraadaha safarka si loo yareeyo July 5 si buuxda ...